I-Ultrasonication yaziwa kahle ukuthi isebenza kahle kakhulu ekuhlelweni kwamakhemikhali we-liposomal. Izinhlobo zokwenziwa kwe-liposome ejwayelekile zihlanganisa i-vitamin C, i-CBD, i-curcumin, i-quercitin, i-astaxanthin, ama-peptides kanye nezinye izinto eziyinkimbinkimbi ngokusebenzisa ezinye i-ultrasonication. I-Ultrasonic liposome encapsulation iyindlela elula, esheshayo futhi ephumelelayo evumela ukukhiqiza ama-vesicles azinzile, athwale kakhulu. Izakhi zomzimba ezihlanganisiwe ze-Ultrasonically zidlula nge-bioavailability ephakeme.
Yini iLiposomes futhi yini imihlomulo yayo?
AmaLiposomes ama-vesicles aqukethe umgogodla omanzi oboshelwe kwelinye noma ngaphezulu ama-phospholipid bilayers. Njengoba ama-liposomes enomsuka wamanzi ozungezwe ungqimba we-lipid negobolondo langaphandle le-hydrophilic, ama-liposomes angamanzi ancibilikayo futhi angahambisa amakhompiyutha ancibilikiswa amanzi ne-soluble kumakhompiyutha athintekayo e-vesicle. Lokhu kwenza ama-liposomes abe uhlelo oluphumelela kakhulu lokulethwa kwama-molekyuli asebenzayo. AmaLiposomes akhiwa ngokuphazamisa ulwelwesi lwezinto eziphilayo, inqubo ekhuthaza futhi eqiniswa yi-ultrasonication.
AmaLiposomes ajwayele ukwenziwa ngama-phospholipids, ikakhulukazi i-phosphatidylcholine, kepha angafaka namanye ama-lipids, anjengeqanda leqanda phosphatidylethanolamine, inqobo nje uma ahambelana nesakhiwo se-lipid bilayer. I-Liposomes yakha ngokuzenzakalelayo lapho ama-phospholipids enamanzi. Esinyatsweni sokuqala – isigaba se-hydration – I-sonication isetshenziselwa ukukhipha ama-lipids nesigaba samanzi ukukhuthaza ukwakheka kwama-vesellles amaningi we-lamellar (MLVs). Kamuva, i-sonication ingasetshenziselwa ukunciphisa usayizi we-liposome uma kudingeka. Ukuthola usayizi omncane we-vesicle, i-sonication isetshenziselwa ukusabalalisa futhi yehlise usayizi we-liposome ukuya kuma-mono-asakazeke ama-vesicles amakhulu ama-Uni-lamellar (ama-LUVs) noma ama-vesicles amancane ama-Uni-lamellar (ama-SUV).
Indlela ye-ultrasonic yokwakhiwa kwe-liposome nokuncishiswa kosayizi we-liposomal ithembekile, ishesha, isebenza kahle, ilula futhi iphephile. Ama-liposomes akhiqizwayo akhombisa umthwalo omningi wezinto ezi-bioactive, ukuqina okuphezulu nokuphakama kwe-bioavailability.
UP400St, i-400 watts enamandla homogeniser enamandla e-400, yokwenziwa kwe-nano-liposomes.
Kungani amabhathi okuhlanza e-ultrasonic engakwazi ukukhiqiza ama-liposomes asezingeni eliphakeme?
Ukukhiqizwa kwe-liposomes kudinga idivaysi ye-ultrasonic engakhipha amandla anele ukudala izinhlayiya ezinobukhulu obulinganayo. Ama-liposomes enziwe ekhaya asebenzisa i-ultrason jewelry jewelry Ukuze ulungiselele ama-liposomes asezingeni eliphakeme, i-probe-hlobo ultrasonicator ubuchwepheshe obukhethwayo njengoba i-probe (sonotrode) ingadlulisela amandla e-acoustic amakhulu adingekayo ekwakhiweni kwama-liposomes asebenza kakhulu phakathi nendawo. Ngokuvamile, i-liposomes ekhiqizwa nge-probe ye-ultrasonic inokusatshalaliswa kosayizi bezinhlayiya eziyi-100-500nm, okuyiyo ephezulu kakhulu yokulayishwa okuphezulu nokuphakama kwe-bioavailability.
Ukusetshenziswa kwe-ultrasonic flow cell reactionor kuvumela ukulungiselela ama-liposomes endaweni engenawo umoya-mpilo ukuvimbela ukonakaliswa kwe-oxidative.
I-Probe Type ultrasonicators inikezela ngamandla adingekayo ukukhiqiza ama-liposomes okuyi:
I-Liposomal Enclocated Molecule nge-Ultrasonics
Uhlu olungezansi lunikeza inkomba yokuthi yiziphi izinto esezifakwe ngempumelelo ekuhlanganiseni kwe-liposome zisebenzisa indlela yokulungiselela ye-ultrasonic.
ama-antioxidants anjenge-glutathione, uvithamini C, amavithamini e-methylated B, i-resveratrol, CoQ10 njll.
ama-phenolics: ama-flavonoids anjenge-fisetin, i-quercitin, i-oligomeric proanthocyanidins (OPC); ama-saponins afana ne-astralgaloside; ama-alkaloids
amaminerali afana ne-magnesium chelates (isib. magnesium threonate, magnesium orotate), zinc, ithusi njll.
ama-terpenes anjenge-astaxanthin, i-limonene, ipinene, i-humulene, i-linalool, i-beta-caryophyllene, i-phytol, i-geraniol, i-terpinolene njll.
ama-lipid anjenge-omega-3 fatty acids EPA ne-DHA; dipalmitoyl-phosphatidylcholine (DPPC) njll.
ama-amino acid anjenge-creatine, glycine, 5-HTP (5-hydroxytryptophan), phenylalanine, L-theanine, GABA (gamma-aminobutyric acid), taurine, N-acetylcysteine (NAC), L-tyrosine, njll.
ama-peptides, isib. i-oxetocin, ama-collagen peptides njll.
ama-polysaccharides anjenge-hyaluronic acid, ama-polisaccharides amakhowe njll.
ama-cannabinoids njenge-CBD, i-CBG, i-THC
ama-nootropics, izidakamizwa ezi-smart, kanye nezithuthukisi ezingqondo, ezingafaka izinto ezishiwo ngenhla namanye ama-molecule
Ukwenziwa kwe-liposomal okwenziwe ngcono kwama-molecule we-bioactive kunikeza isilinganiso esiphakeme sokumunca, i-bioavailability ephakeme futhi kungavumela izinto ukuthi zinqamule umgoqo wobuchopho begazi.
Izinhlelo ezingafani zokulethwa kwezidakamizwa ezenziwa nge-lipid zingama-nano-emulsions kanye ne-lipid-based colloidal carriers ezifana ne-lipid nanoparticles (SLN) eqinile ye-lipid carriers (NLC). Zonke, ama-nano-emulsions, ama-SLN nama-NLC angakhiwa ngokuthembekile futhi alayishwe ngaphansi kwe-sonication.
I-homogenizer ye-ultrasonic I-UIP2000hdT (2kW) ngesivinini sokushukumisa se-batch
Izici Ezithonya Ikhwalithi yeLiposome
Ikhwalithi yeLiposome kunqunywa ngokufana ngosayizi wezinhlayiyana nama-lamellarity, ukusebenza kahle kokufaka (% EE) / umthwalo wokuhambisa, nokuqina. Indlela yokulungiselela, izimo zokulungisa, izinto zokusetshenziswa, kanye nesitoreji yizinto ezibalulekile ezifaka umfutho kwikhwalithi yakhona yokwenziwa kwe-liposomal. Isithombe se-SEM kwesobunxele sibonisa ama-liposomes alungiselelwe kahle afakwe i-DHA ne-EPA fatty acids esebenzisa i-Hielscher ultrasonicator UP200S (Isifundo nesithombe: Hadian et al. 2014).
Ukulungiswa kwe-liposomes kwe-ultrasonic kuyindlela enokwethenjelwa, enikeza usayizi omncane, ofanayo wezinhlayiya ze-liposomal ngokulayisha okuphezulu kwama-molecule we-bioactive. Amapharamitha wenqubo we-Ultrasonic (amplitude enjalo, amandla aphelele, isikhathi, i-pulsation, izinga lokushisa, ingcindezi) angaguqulwa kahle. Njengenqubo yokuphrinta engenalo olushisayo, umgomo wokusebenza we-sonication usekelwe ku-shear yemishini engamakhompyutha. Ukukhuphuka kokushisa koketshezi lwe-sonication kuzachazwa ngumthetho wesibili we-thermodynamics, othi noma yimaphi amandla asetshenziswayo ekugcineni aguqulwa abe ukushisa. Ukuze ulondoloze izinga lokushisa eliphansi le-liposomal medium, i-Hielscher Ultrasonics inikezela ngezixazululo ezipholile ezipholile, ezinjengokugeza kweqhwa kanye nama-reactors kanye nokugeleza kwamaseli ngamajakhethi okupholisa. Imiphumela yokukhiqizwa kwe-liposome ye-ultrasonic iyatholakala futhi, okubalulekile kwinqubo evunyelwe kanye nekhwalithi ephezulu yomkhiqizo.
Ama-phospholipids asezingeni eliphakeme anephesenti elikhulu le-phosphatidylcholine ne-phosphatidylethanolamine anikeza igobolondo elizinzileyo le-liposome elivimba ukuvuvukala kwezakhi zomzimba. Igobolondo le-phospholipid eliqinile futhi livikela izakhi zomzimba ezivalekile ekuqothulweni kokuwohloka kwe-oxidative kanye nokushisayo. Ngakho-ke, isilinganiso esilinganiselayo sama-phosopholipids esigabeni samanzi kuya kwizakhi ezihlanganisiwe (ama-molecule we-bioactive) kubalulekile.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Liposome Production
Ukusebenza kahle kwe-High Encapsulation / Entrapment (% EE)
ngokushesha & ephumelelayo
Ukuqina kwesikhathi eside
ephephile & Ukusetshenziswa Okulula
Ama-Ultrasonicators aphezulu enza umsebenzi weLiposome Production
Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics 'ziyimishini ethembekile esetshenziswa ekwenziweni kwemithi nokwengezelela ukwakha ama-liposomes asezingeni eliphakeme alayishwe amavithamini, ama-antioxidants, ama-flavonoid, ama-peptides, ama-polyphenols nezinye izinto eziyinkimbinkimbi / izakhi zomzimba. Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ayo, ama-Hielscher anikeza ama-ultrasonicators avela ku-compact hand-hand lab homogenizer ehlanganisiwe kanye ne-bench-top ultrasonicators kumasistimu we-ultrasonic wezimboni ngokugcwele wokukhiqizwa kwamanani aphezulu we-liposomal formuction. Ukwakheka kwe-liposome ye-Ultrasonic kungaqhutshwa njenge-batch noma njengenqubo eqhubekayo yokufaka umugqa kusetshenziswa i-reactor ye-ultrasonic. Uhla olubanzi lwe-sonotrodes (i-phenes) nemikhumbi ye-reactor iyatholakala ukuqinisekisa ukusethwa okulungile komkhiqizo wakho we-liposome. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Ukulawulwa okuqondile kwawo wonke amapharamitha wenqubo ebalulekile anjenge-amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa nesikhathi se-sonication kwenza inqubo ye-ultrasonic ithembeke futhi izalwe kabusha. I-Hielscher Ultrasonics iyazi ngokubaluleka kwekhwalithi ephezulu yomkhiqizo futhi isekela abakhiqizi abongezayo nabezokwelapha ukuze basebenzise inqubo yokuma kanye ne-GMP (Izindlela Ezinhle Zokukhiqiza) nge-software ehlakaniphile nokuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo. Ama-homogenizer ethu edijithali arekhoda ngokuzenzakalelayo wonke amapharamitha enqubo we-ultrasonic ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi. Izithombisi zokuthinta kwedijithali kanye nokulawulwa kude kwesiphequluli kuvumela inqubo eqhubekayo yokuqapha futhi inike amandla ukulungisa amapharamitha wenqubo ngokunembile noma nini lapho kudingeka. Lokhu kusiza ukuqapha kwenqubo kanye nokulawulwa kwekhwalithi kakhulu.